ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်လာသော ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် မြစ်ရေစီးအားသုံး တာဘိုင်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည် | Myanmar Industry Portal
» ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်လာသော ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် မြစ်ရေစီးအားသုံး တာဘိုင်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်
ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်လာသော ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် မြစ်ရေစီးအားသုံး တာဘိုင်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရာ၌ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့်အရာမှာ စွမ်းအင်ပင်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်အတွက် သမားရိုးကျ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး စသည်တို့မှ ထုတ်ယူသုံးစွဲလျက် အဆိုပါအရင်းအမြစ်များ ကုန်ဆုံးပျောက်ကွယ်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် (Crisis) ကပ်ဘေးကို ကျော်လွှားရန် မျှော်တွေးတွက်ဆ၍ စွမ်းအင်များရရှိရန် တီထွင်ကြံဆရှာဖွေခြင်းသည် အနာဂတ်ကမ္ဘာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ NOVA Energy Co., Ltd. သည် (Tidal Stream) ဒီရေစီးကြောင်းကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် သဘာဝကပေးသော ရေစီးကြောင်း စွမ်းအင်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည့် Environmental Friendly Generator များကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက် ရှိသည်။
NOVA Energy Co., Ltd. မှ ထုတ်ဝေသည့် NOVA OCEAN CURRENT GENERATOR အမည်ရှိ စာစောင်အား ဆီလျော်စွာ ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
NOVA စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီး ဆန်းသစ်မှုကို ကမ္ဘာကြီးအား ရစ်ပတ်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် ရေထုမှ တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်လျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိနေထိုင်နေသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေပမာဏစုစုပေါင်းမည်မျှရှိသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာ့ အပြင်ဖက်တစ်နေရာမှ ကမ္ဘာကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တိုင်း တွေ့ရသော ပုံရိပ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ရေများဖုံးလွှမ်းထားပုံကို အမှန်တကယ်ခံစားနားလည် အသိအမှတ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရသော ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ အပြာရောင်ပုံရိပ်များမှာ ကမ္ဘာကြီးကို ရေထုက ကြီးမားသော ပမာဏဖြင့် ပါဝင်နေလွှမ်းပတ်နေပုံကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဧရိယာ၏ စုစုပေါင်း (၇၀%) ကို ရေထုက လွှမ်းခြုံထားသည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိရေထုထည် ပမာဏအနက် (၉၇.၅%) မှာ သမုဒ္ဒရာနှင့် ပင်လယ်ရေဖြစ်ပြီး ကျန် (၂.၅%) မှာ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေ၊ ဝန်ရိုးစွန်းများရှိ ရေခဲတောင်များ၊ ရေကန်များနှင့် မြေအောက်ရှိရေအရင်းအမြစ်များမှ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ဝန်းရံတည်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအောက်မှရရှိသော ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များမှာ မြစ်ချောင်း၊ သမုဒ္ဒရာများကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ သမာရိုးကျ သုံးစွဲလျက်ရှိသော ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး အစရှိသည့် စွမ်းအင်များမှာ စျေးနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိနေသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လေစွမ်းအင်၊ နေစွမ်းအင်၊ သမုဒ္ဒရာရေစွမ်းအင်တို့ကို Alternative Energy Source များဖြင့်တစ်ဖက်မှ ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် စဉ်းစားနေကြရပြီဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအနေဖြင့် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင် ကုန်ဆုံးပျောက်ကွယ်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာမည့် (Crisis) ကပ်ဘေးကို ကြုံတွေ့ခံစားရမည့် သက်ရှိများ အဖြစ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပြီဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်များကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်နှင့် ကလေးများ၏ အနာဂတ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ မြေကြီး၏(၇၀%) ဖြစ်သော ရေထုကို စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးကြပါစို့။
သဘာဝမှတွေ့ရှိသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များ၏ စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ကူးပြောင်းနိုင်မှုစွမ်းရည် (Conversion Efficiency)
နေစွမ်းအင် (Solar Energy) ၁၈%
နေစွမ်းအင် (Solar Energy) အနေဖြင့် နေရောင်ခြည်ကျရောက်မှုအပေါ်တွင် မူတည်နေ ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် နေရောင်ခြည်ရရှိမှုပြောင်းလဲပါက စွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လေစွမ်းအင် (Wind Power) ၁၂%
လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် Low-frequency (ကြိမ်နှုန်းနိမ့် ရိုက်ခတ်မှု) ပြဿနာ ရှိပါသည်။ လေစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရန် တည်ငြိမ်သော လေတိုက်နှုန်းရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ငှက်အုပ် များပျံသန်းတိုက်မိပါက Wind Turbine များ၏ လည်ပတ်နေသော ဒလက်များဖြင့် ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်များရှိနိုင်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေစွမ်းအင်/ မြစ်ရေစီးကြောင်းစွမ်းအင် (Tidal Current/ River Current) ၇၅%
ပင်လယ်ရေ၏ ဒီရေအတက်အကျမှာ တစ်နေ့လျှင် (၄) ကြိမ်ရှိပြီး အချိန်ပြောင်းလဲလျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီရေအတက်အကျ တည်ငြိမ်မှုမရှိနိုင်ပါသဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု မတည် ငြိမ်နိုင်ပါ။ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြစ်ရေမှာလည်း ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရေစီးဆင်းမှု အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းစွမ်းအင် (Ocean Current Energy) ၁၀၀%
သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းမှာ စီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်သောကြောင့် တစ်ရက်လျှင် (၂၄) နာရီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
သမုဒ္ဒရာအပူစွမ်းအင် (Ocean Thermal Energy) ၁၀၀%
သမုဒ္ဒရာရေတွင် ရေပြင်အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းအကြား အပူချိန်ကွာခြားမှုကို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (Maintenance) ခက်ခဲပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ကြီးမားနိုင်ပါသည်။
(Flow of the Ocean, Ocean Current)
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်း စီးဆင်းမှုဖြစ်စဉ် (Phenomena) မှာ ကမ္ဘာလည်ပတ်မှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ သမုဒ္ဒရာရေစီးဆင်းမှု အဓိက စီးကြောင်းမှာ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းမှ အနောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအထိ မက္ကဆီကိုနှင့် အနောက် အတ္တလန္တိတ် ရေစီးကြောင်းများအဖြစ် စီးဆင်းပါသည်။ အဆိုပါ ရေစီးကြောင်းကြီးမှာ ပုံသေစီးဆင်း မှုနှုန်း၊ ပုံသေ Direction ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၂၄) နာရီပတ်လုံး စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းမှာ လေ၊ ရေနှင့် အပူချိန်၊ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အနေအထား တို့ကြောင့် Pattern အမျိုးမျိုးဖြင့် စီးဆင်းပါသည်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၏ စီးဆင်းမှုမှာ ကမ္ဘာ့ လည်ပတ်နှုန်း လျော့နည်းလာလျှင်တောင်မှ ရပ်တန့်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေစီး ကြောင်း၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာ သာမန်လေတိုက်ခတ်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နှေးကွေးပါသည်။ သို့သော် ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာရေ၏ သိပ်သည်းမှုကြောင့် စွမ်းအင်သယ်ဆောင်နိုင်မှုပမာဏ မြင့်မားပါသည်။ ပင်လယ်ရေ ၏ သိပ်သည်းဆမှာ လေ၏ သိပ်သည်းဆထက်အဆ (၈၀၀) ခန့် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဧရိယာတူညီ သော မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် တူညီသောအားတစ်ခု ပေးလိုက်ပါက ပင်လယ်ရေ၏ ရွေ့လျားမှု နှုန်းမှာ 12 kph (7.5 mph) ရှိချိန်တွင် လေ၏ရွေ့လျားမှုနှုန်းမှာ 110 kph (68.4 mph) ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းစွမ်းအင်နှင့် ဒီရေစွမ်းအင် ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ သမုဒ္ဒရာ ရေစီးကြောင်းတစ်ခုတွင် (၁၀၀%) တည်ငြိမ်သော ရေစီးကြောင်း စီးဆင်းမှုရှိပြီး ပင်လယ်ဒီရေတွင် (၇၅%) သာရှိပါသည်။ ပင်လယ်ဒီရေစီးကြောင်းမှာ တစ်နေ့လျှင် (၄) ကြိမ်ခန့် ဒီရေအတက် အကျရှိခြင်းကြောင့် ရေစီးကြောင်းတည်ငြိမ်မှု (၇၅%) သာရှိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
NOVA ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းအင်နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ
NOVA ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု လျော့နည်းမှုအရှိဆုံးနှင့် သဘာဝမှ ပေးသော သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းစွမ်းအင်ဖြင့် အသုံးပြုမည့် Environmental Friendly Generator ကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းအပိုင်းရှိ အဓိကသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းကြီး (၂) ခု ရှိပါသည်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ရှိသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းမှာ Cape Hatteras (Hatteras အငူ) တွင်စတင်ပြီး မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ထဲသို့ စီးဆင်းပါသည်။ (ရေစီးကြောင်းအကျယ်မှာ 200 km ရှိပြီး စီးဆင်း မှုနှုန်းမှာ4knots (2.056 M/sec) (6.75 ft/sec) ရှိပါသည်။)
Kuroshiro သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းမှာ ဖိလစ်ပိုင်လူဇုန်ကျွန်းအနီးမှ စတင်စီးဆင်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ တောင်ပိုင်းကျွန်းများအနီးသို့ စီးဆင်းပါသည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းရှိ Tanegashima ကျွန်းများအလွန်မှ Yakushima ကျွန်းအထိ ဦးတည်လျက်ရှိပါသည်။ (ရေစီးကြောင်းအကျယ်မှာ 100 kmရှိပြီး စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာ3knots (1.542 M/sec) ရှိပါသည်။)
6259 km (3,903 mile) မှ 6712 km (4,195 mile) ရှည်လျားပါသည်။ အမေဇုန်မြစ်သည် သူ၏ အချက်အလက်များအရ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြစ်အဖြစ်တည်ရှိနေပါ သည်။ အမေဇုန်မြစ်၏ သယ်ဆောင်နိုင်သော ရေပမာဏမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြစ်များအားလုံး ၏ သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ စီးဝင်သောရေ၏ (၂၀%) ရှိပါသည်။ အမေဇုန်မြစ်၏ အကျယ် ဆုံးနေရာမှာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် 11 km (6.8 mile) ရှိပါသည်။ ခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ 110,000 sq-km ခန့် ရေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်း လျက်ရှိပါသည်။ မိုးရာသီများတွင် အမေဇုန်မြစ်မှာ ရေလွှမ်းဧရိယာ 350,000 sq-km ခန့် ရှိပါသည်။ မိုးရာသီရေဖုံးလွှမ်းမှုများချိန်တွင် အမေဇုန်မြစ်၏ အကျယ်ဆုံးနေရာမှာ 40 km (24.8 mile) အထိ ကျယ်ဝန်းပါသည်။
နိုင်းမြစ်၏အရှည်မှာ 6695 km (4184 mile) အရှည်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၉) နိုင်ငံကို ဖြတ်သန်း၍ စီးဆင်းပါသည်။ ယူဂန်ဒါ၊ ဆူဒန်၊ အီဂျစ်၊ အီသီယိုပီးယား၊ ဇိုင်ယာ၊ ကင်ညာ၊ တန်ဇန်နီးယား၊ ရဝမ်ဒါ၊ ဘူရွန်ဒီတို့အထိ ရှည်လျားပြီး Victoria ရေကန်ကြီး အတွင်းသို့လည်း စီးဝင်ပါသည်။ နိုင်းမြစ်သည် မြင့်မားသောတောင်တန်းများရှိသော တောင်ဘက်ပိုင်းမှ နိမ့်သောမြောက်ဘက်ပိုင်းသို့ စီးဆင်းပြီး အာဖရိကအလယ်ပိုင်း တောင်များမှ အာဖရိကအလယ်ပိုင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် နိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသကို ဖြတ်သန်း၍ မြေထဲပင်လယ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ပါသည်။ နိုင်းမြစ်၏ မြေထဲပင်လယ်အတွင်းသို့ ရေစီးဝင် မှုနှုန်းမှာ တစ်ရက်လျှင် (၃၀၀) ကုဗမီတာသန်းခန့်ရှိပါသည်။
(ဂ) မစ်ဆူရီ-မစ္စစ္စပီမြစ် (Missouri-Missispi River)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြစ်များတွင် မစ်ဆူရီမြစ်မှာ မစ္စစ္စပီမြစ်၏ မြစ်လက် တက်ဖြစ်ပြီး 2540 mile ရှည်လျားပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အရှည်ဆုံး မြစ်မှာ မစ်ဆူရီမြစ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မစ်ဆူရီမြစ်၏ ရေထုထည်ပမာဏမှာ မစ္စစ္စပီမြစ် မှာကဲ့သို့ သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ မစ္စစ္စပီမြစ်မှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး ရေထုထည်ပမာဏ ပိုမိုကြီးမားပါသည်။ မစ္စစ္စပီမြစ်မှာ မင်နီဆိုးတားပြည်နယ်၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ စတင်စီးဆင်းပြီး မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့အတွင်းသို့ စီးဝင်ပါသည်။ မစ္စစ္စပီမြစ်နှင့် သူ၏ မြစ်လက်တက်များမှ အပလေချီယံတောင်တန်းနှင့် ရော့ကီးတောင်တန်းတို့ အကြားရှိ မြေပြန့်လွင်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါသည်။ မစ္စစ္စပီမြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြစ်ဝှမ်းဒေသဖြစ်ပြီး မြစ်ဝှမ်းဧရိယာ 1,247,300 sq-mile (3,230,490 sq-km) ရှိပါသည်။ အဆိုပါ မြစ်ဝှမ်းဧရိယာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နယ် (၃၁) ခုနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ပြည်နယ် (၂) ခု ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။
(ဃ) ယန်ဇီမြစ် (Yangtze River)
ယန်ဇီမြစ်မှာ 6385 km (3915 mile) ရှည်လျားပါသည်။ ယန်ဇီမြစ်၏ မူလ စီးဆင်းရာဒေသမှာ ချင်းဟိုင်ပြည်နယ်မှ စတင်စီးဆင်းပြီး အရှေ့ဘက်သို့ ဦးတည်၍ ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်း၍ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်ပါသည်။ တရုတ် ပြည်၏ အကြီးဆုံးရေချိုကန်ကြီး (၅) ခုအနက် (၄) ခုမှ ရေများမှာ ယန်ဇီမြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ပါသည်။ ယန်ဇီမြစ်မှာ တရုတ်ပြည်၏ တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းကို ခွဲခြားပေး သောမျဉ်းအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ သို့ရာတွင် ပထဝီပညာရှင်များက Qinling-Huai မြစ်ကို ပထဝီဆိုင်ရာ သတ်မှတ်မှုမျဉ်းကြောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းGenerator(Ocean Current Generator)
အဆိုပါ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်း Generator တွင် (၁၉၀) ပေအမြင့်ရှိ ဒေါင်လိုက် ရေပေါ် ဗောနှင့် NOVA Turbine (၄) ခု ပါရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 2,000 kWh ကို သမုဒ္ဒရာ ရေစီးအားကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ရေပေါ်ဗော (၂၀၀) ပါဝင်သော ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 400,000 kWh ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သမုဒ္ဒရာနှင့် ပင်လယ်များအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
NT-2 Turbine အမျိုးအစားသည် ဒီဇိုင်းအသစ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Hydrodynamic ရေအားသုံးတာဘိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တာဘိုင်အနေဖြင့် ရေစီးအား 3~4 Knots (1.542 M/sec မှ 2.056 M/sec) ရှိ ရေစီးအားအတွင်း ညင်သာစွာလည်ပတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ တာဘိုင်များ လည်ပတ်ရာမှ ရရှိသော လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်ကို Hydraulic Pressure အဖြစ် ပြောင်းလဲပါသည်။ အဆိုပါ Pressure ကို ရေပေါ်ဗောမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်း၍ Cable များဖြင့် ထိန်းချုပ်ဌာန (Control Station) သို့ Cable များဖြင့် ပေးပို့ပါသည်။ အဆိုပါ Pressure အား ရေအောက်လျှပ်စစ် Cable ကြိုးများဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ ဗဟိုပင်မထိန်းချုပ် ဌာနသို့ ပေးပို့ကာ ကုန်းမြေပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးပို့အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံထားပါသည်။
NOVA NT-001 NT-002
ဒီရေအားသုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက် (Tidal Current Generator) နှင့် မြစ်ရေစီးအားသုံး လျှပ်စစ် ထုတ်စက် (River Current Generator)
ဒီရေအားသုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက်နှင့် မြစ်ရေစီးကြောင်းအားသုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက်တို့ကို မြစ်ရေစီးအားအနည်းဆုံး2mi/hr (mile per hour) ရှိသော မြစ်ရေထဲတွင် ချထားအသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော တာဘိုင်ဒလက် (Tails) များဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ တာဘိုင် နှင့် ဒလက်ကို မြစ်ရေအနက် အနည်းဆုံး 9.8 ft ~ 32.8 ft (3 meter မှ 10 meter) အတွင်း အသုံး ပြုနိုင်ရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ထားပါသည်။
သမုဒ္ဒရာရေအနက်နှင့် မြစ်ရေစီးကြောင်း၏ အနေအထားအမျိုးမျိုးကို လိုက်၍ လှေများ၊ ရေပေါ်ဗော (Buoys) များ၊ တံတားများ (Bridges) တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။ NOVA NT-001 ကို လှေများ၊ ရေပေါ်ဗောများနှင့် တွဲဖက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ထားသည်။ ၎င်းလှေများနှင့် ရေပေါ်ဗောများကို မျောပါမသွားစေရန် မြစ်၏ ရေအောက်ကြမ်းပြင် တွင် ကျောက်ဆူးများဖြင့် ကျောက်ချထားရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ NOVA NT-001 နှင့် NT-002 ၏ ကိုယ်ထည်ကို FRP (Fibre Reinforced Plastic) သို့မဟုတ် Steel ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ NT-002 မှာ တံတားများဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းအားများသည် ရေပြင်ညီရွေ့လျားမှု (Horizontal Motion) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ပင်လယ်ရေအတက်အကျသည် ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားမှု (Vertical Motion) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မြစ်ရေစီးကြောင်းသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းပါသည်။ မြစ်ရေစီးကြောင်း ၏ ဦးတည်ချက် (Direction) မှာ မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ တစ်သတ်မတ်တည်း စီးဆင်းနေပါသည်။ သို့သော် မြစ်ရေစီးနှုန်း (Flow Speed) မှာ နေရာအနေအထားကိုလိုက်၍ ပြောင်းလဲစီးဆင်းနေပါ သည်။
NOVA စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ရေစီးအားမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို (၁၀၀%) အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့မြေထုမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ အဖြစ် ဒီရေစီးကြောင်း၊ မြစ်ရေစီးကြောင်းမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော နည်းပညာများ ဖန်တီး နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါနည်းပညာရရှိသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့လူသားများအနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် CO2 ထုတ်လုပ်မှုရှိသော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ (Fossil Fuel) နှင့် နူကလီးယားပစ္စည်း စွန့်ပစ်မှု အန္တရာယ်များရှိသည့် စွမ်းအင်ထုတ်ယူအသုံးပြုမှုများအပေါ် လုံးဝမှီခိုအားထား စိုးရိမ်စရာ မလိုဘဲ ရေစီးအားသုံး စွမ်းအင်အသစ်များကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်ဌာန (Control Station)
သမုဒ္ဒရာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ဌာန (Control Station) ကို ရေပြင် အထက် မီတာ (၂၀) အမြင့်တွင် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်ဌာနတွင် ဓာတ်အားထုတ် လုပ်မည့် စက်ရုံလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ဆောင်ရွက် ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မည့်စက်ရုံတွင် ဓာတ်အားထုတ်စက် (Generator) ဟိုက်ဒရောလစ် အားသုံးမော်တာ (Hydraulic Motor) နှင့် Power Cable, Control Cable, ထိန်းချုပ်ယူနစ်များ (Control Panels) နှင့် ထိန်းချုပ်ခန်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်ရန် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း ကို ဒေါင်လိုက်ရေပေါ်ဗော၏ထိပ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။
ဒေါင်လိုက်ရေပေါ်ဗော (Vertical Buoy)
သမုဒ္ဒရာရေစီးအားသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်စက်ရုံ (Ocean Current Generator) ၏ အဓိကအဆောက်အဦမှာ ဒေါင်လိုက်ရေပေါ်ဗော (Vertical Buoy) ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါင်လိုက်ရေ ပေါ်ဗော၏ အလျားမှာ 120 meter (393.7 ft) ရှိပြီး ရေအောက်တွင်ထားရှိ အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါသည်။ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းအတွင်း မျောပါသွားမှုမရှိစေရန်နှင့် ရေစီးအားအတွင်း ဒေါင်လိုက်တည်ငြိမ်မှု ရှိနေစေရန် ကျောက်ဆူးများ၊ Weight တုံးများ၊ ဆိုင်းကြိုးများဖြင့် ထိန်းထား ဆိုင်းထားပေးပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ဌာန (Control Station) အား တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်နှင့် ဒီရေနှင့် လှိုင်းများ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
ဒေါင်လိုက်ရေပေါ်ဗောအတွင်းပိုင်းတွင် Power Cable များကို Hydraulic Pump များ နှင့် ဆက်သွယ်ပေးထားပြီ: Turbine Shaft များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ တာဘိုင်ဝင်ရိုး (Turbine Shaft) များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်ကို Hydraulic Pressure အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
ကျောက်ဆူးနှင့် အထိန်း Weight တုံးများ (Anchors and Weights)
ဒေါင်လိုက် ရေပေါ်ဗောအား ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၏ ရေအတက်အကျအလိုက် တည်ငြိမ်မှုရရှိစေရန်နှင့် ရွေ့လျားမှုမရှိစေရန်အတွက် ကျောက်ဆူးများနှင့် အထိန်း Weight တုံးများ ဖြင့် ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှနေ၍ ဆိုင်းကြိုးများဖြင့် ဆိုင်းထားပေးပါသည်။ ပင်လယ်ရေအောက် ကြမ်းပြင်ရှိ ပင်လယ်နွံများ၊ ကျောက်ဆောင်များနှင့် ကျောက်တန်းများ တည်ရှိမှုအနေအထားအရ အသုံးပြုမည့် ကျောက်ဆူးများကို ပုံစံပြောင်းလဲသုံးစွဲသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေစီးအားသုံး တာဘိုင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရေစီးအားတွင် လှုပ်ရှားနိုင်မည့် ငါးပုံ သဏ္ဍာန်ကို အခြေခံ၍ (Hydrodynamic Shape) ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
တာဘိုင်ကိုယ်ထည်ကို သံမဏိ (Steel) သို့မဟုတ် FRP (Fibre Reinforced Plastic) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ရေယက် (Propellers) များကို တိမ်းစောင်းသောအနေအထားဖြင့် ကိုယ် ထည်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ တာဘိုင်ကိုယ်ထည်ကို အခေါင်း (Hollow) ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ထည်ကိုဖြတ်၍ ရေများ လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနိုင်ရန်နှင့် တာဘိုင်ကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှုရှိနေစေ ရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ရေယက်များ (Propellers) ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြုလုပ်မည့် တာဘိုင်ကိုယ်ထည်၏ ဧရိယာအပေါ်မူတည်၍ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေးနှင့်အဖြေ (Q & A)
အမေး - Knots (kn) ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း?
အဖြေ - Knots (kn) ဆိုသည်မှာ ရေစီးအား အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာသောယူနစ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နာရီလျှင် (mile per hour) စီးဆင်းသွားသော ရေ၏ ရွေ့လျားမှုကို မိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် -
1 knots = 1.852 km/h ဖြင့် ညီမျှပါသည်။
1 knots = 1.151 mile/h ဖြင့်လည်း ညီမျှပါသည်။
(1knots = 1852 M/h)
= 0.5144 M/sec
= 1.687 ft/sec
အမေး - အသုံးချနိုင်မှုစွမ်းရည် (Efficiency) အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင် (Energy) အမျိုးအစားကို ဖော်ပြပါ?
အဖြေ - သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းစွမ်းအင်နှင့် သမုဒ္ဒရာအပူစွမ်းအင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
အမေး - ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှ စွမ်းအင် (၁၀၀%) ရရှိဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်သေချာနိုင်ပါသလဲ?
အဖြေ - ကမ္ဘာ့မြေကြီးလည်ပတ်ခြင်း မရပ်တန့်သရွေ့ ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းတွေ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းတွေကနေ စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူရရှိနေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမေး - တာဘိုင်ကို ပင်လယ်ထဲချထားသည့်အခါ တာဘိုင်ရေယက်များနှင့် ပင်လယ်ရေမှော်များ (Kelp) ကပ်ငြိလုံးထွေး၍ တာဘိုင်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်မှု ရှိ/မရှိ?
အဖြေ - တာဘိုင်၏ ရေယက်များကို ပင်လယ်ရေမှော် (Kelp) များ ကပ်ငြိလုံးထွေး၍ တာဘိုင် လည်ပတ်မှုမထိခိုက်စေရန် ရေယက် (Propeller) များကို ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အမေး - သမုဒ္ဒရာအတွင်း၊ မြစ်အတွင်း ဓာတ်အားထုတ်စက်ရုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းက ရေပြင် ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသလား?
အဖြေ - ရေပြင်ညစ်ညမ်းမှု လုံးဝမရှိစေပါ။ဓာတ်အားထုတ်စက်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ လုံးဝစွန့် ထုတ်မှုမရှိပါ။
အမေး - ပင်လယ်ရေ(သို့)မြစ်ရေမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရေစီးအားအမြန်နှုန်း မည်မျှရှိရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
အဖြေ - ရေစီးအားအမြန်နှုန်း 3knots မှ 4knots အတွင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။
(3 knots = 1.5432 M/sec = 5.061 Ft/sec)
(4 knots = 2.057 M/sec = 6.748 Ft/sec)
အမေး - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် မည်သည့်နေရာများတွင် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသလဲ?
အဖြေ - ဂျပန်နိုင်ငံ Kuroshio ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းအတွင်းနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ Jintao ရေစီးကြောင်းများအတွင်း စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အမေး - NOVA Turbine များကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏမည်မျှ အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလဲ?
အဖြေ - စမ်းသပ်မှုများအရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 200 kW ကို အောင်မြင်စွာစမ်းသပ် ထုတ်လုပ် ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပါသည်။
အမေး - NOVA Turbine ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို အခြားမည်သည့်နေရာများ တွင်လည်း ဆောင်ရွက်၍ ရပါသလား?
အဖြေ - မြစ်အတွင်းရှိ တံတား (Bridges) များ၊ ရေပေါ်ဗော (Buoys) များ၊ သမုဒ္ဒရာရေစီး ကြောင်းများအတွင်း ဒီရေစီးကြောင်းနှင့် မြစ်ရေစီးကြောင်းများအတွင်းတွင်လည်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
အမေး - ယခု စမ်းသပ်မှုများအတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာများက မည်သည့်နေရာများဖြစ်ပါသလဲ?
အဖြေ - ဂျပန်နိုင်ငံ Kuroshio ရေစီးကြောင်းအတွင်း၊ မက္ကစီကို ပင်လယ်ကွေ့ရေစီးကြောင်း၊ မြောက်အမေရိကတိုက် မစ္စစ္စပီ-မစ်ဆူရီမြစ်အတွင်း၊ နိုင်းမြစ်နှင့် အမေဇုန်မြစ်အတွင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အမေး - ရေပေါ်ဗောနှင့် တာဘိုင်များအနေဖြင့် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် မြစ်ချောင်းများအတွင်းရှိ ရေသတ္တဝါများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသလား?
အဖြေ - ရေသတ္တဝါများအနေဖြင့် တာဘိုင်များနှင့် တိုက်မိခြင်းများ မရှိနိုင်ပါ။
အမေး - NOVA ၏ Turbine များကို ရေသတ္တဝါများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် အထူးပြုဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါသလား?
အဖြေ - Turbine ၏ဒီဇိုင်းကို ကြီးမားသောငါးကြီးတစ်ကောင်၏ ပုံစံအတိုင်း အခြေခံ၍ ပြုလုပ် ထားပါသဖြင့် ငါးသတ္တဝါငယ်များ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားစေရန် အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းအင်လိုအပ်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးအတွက် ကမ္ဘာကြီးလည်ပတ်နေပြီး ဒီရေအတက်အကျရှိနေသ၍ ဤစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ပင်လယ်ကမ်းခြေထိစပ်နယ်မြေ များစွာရှိပြီး မြစ်ချောင်းပေါများသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်း ဤစနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်လိုအပ်မှုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ကူပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ယခုလာမည့် မကြာမီကာလအတွင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်များ ပေါများသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ကြီးများအတွင်း ချထားအသုံးပြုနိုင်မည့် ရေစီးအားသုံး တာဘိုင်များကို ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန် မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ သည်။